သူမ ဘယ်ကလာသလဲ??? | Mobile Master (ပခုက္ကူ-ကမ္မ)
လွန်ခဲ့ တဲ့(၃)ရက်က မြန်မာစာ အချိန်မှာ မြန်မာစာဆရာကမြန်မာသဒ္ဒါကိုသင်ရင်
သုံးသွားတဲ့ဝါကျတစ်ကြောင်းကို ကျွန်တော်အနေနဲ့ ဘ၀င်မကျဖြစ်ခဲ့ မိတယ်။
သင်ခန်းစာမှာ ပုဒ်ဆက်သမန~ဓ အကြောင်းဖြစ်ပြီး သုံးသွားသည့်ဝါကျမှာအောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်။
သူ(နာမ်စား) သို့ မဟုတ် သူမ(နာမ်စား) လာခဲ့ ။ ဟူရ်ျဖြစ်သည်။
ကျွန်တော်သိထားသည်မှာ "သူမ"ဟူသည့်စကားလုံးသည် မြန်မာစကားလုံးမဟုတ်ပါ။
မြန်မာစကားလုံးမဟုတ်သည့်အပြင် အခြားမည်သည့်ဘာသာစကားတွင်မှ "သူမ"ဆိုသည်
စကားလုံးရှိမနေပါ။ ထို့ သို့ မရှိသည်ကို မြန်မာစာဆရာက ဘာကြောင့်သုံးသွားရတာလဲဆိုတာကို
ကျွန်တော်အခုဆိုလိုချင်သည်မှာ ဆရာကို အပြစ်တင်လိုရင်းမဟုတ်ပါ။ "သူမ" ဟူသည့်စကားလုံးကို
ဆိုခဲ့ သည့်အတိုင်း "သူမ" သည် မြန်မာစကားလုံးမဟုတ်ပါ။
က်ျသို့ ပြောနေရသည်မှာ အခြားဘာသာများမှစကားလုံးများကို မွေးစားသုံးယူရ်ျရသောကြောင့်ဖြစ်သည်။
သို့ သော် "သူမ" သည်မည်သည့်စကားတွင်မှရှိမနေပါ။ "သူမ" စတင်ဖြစ်ပေါ်လာပုံကိုကျွန်တော်အနေနဲ့ 
စာဖတ်သူမိတ်ဆွေတို့မှတ်မိကြမည် ထင်ပါသည်၊ ကျွန်တော်တို့ ငယ်စဉ်က အင်္ဂလိပ်စာ သင်ကြားရင်း ကျက်မှတ်ခဲ့ ရသည်ကို သတိပြန်ဖော်ပေးပါမည်။ ယင်းမှာ he=သူ ၊ she=သူ(မ)
စသည့်ဖြင့်ကျက်မှတ်ခဲ့ ရသည်။ကျွန်တော်တို့ သည် အင်္ဂလိပ်စာကို ဒုတိယဘာသာစကားအဖြစ်သင်ကြားရ
သူများဖြစ်သည့်အတွက် အထီး၊ အမ ကွဲပြားစေရန် she=သူ နောက်မှအမျိုးသမီးဖြစ်ကြောင်း
သိသာစေရန် "မ"ဆိုသည့်စကားလုံးလေးအား ကွင်းစကွင်းပိတ်နှင့် ရေးထားသည်ကို မိတ်ဆွေတို့သိရှိထားပြီးဖြစ်သည်။
တကယ်တော့ he=သူ ၊ she=သူ ပါပဲ။
ဒါကိုဘာသာပြန်သူတွေက သူမ သူမ နဲ့ လုပ်နေတော့ အမှားကြာ၊ အမှန်ဖြစ်သွားမည်ကိုလွန်စွာစိုးရိမ်ပါသည်။
သိသာသွားအောင် ကျွန်တော် she၊ her ပါသည့် ၀ါကျကိုဖွဲ့ ပြပါမည်။
She is my girl-friend. သူကကျွန်တော်ရည်းစားလေ။
Hear is my friend, her name is meary. ဟောဒီမှာကျွန်တော်သူငယ်ချင်းသူနာမည်က မေရီ ဖြစ်ပါတယ်။
အထက်ပါစာကြောင်းများကိုကြည့်ပါ she/ her ကို အမျိုးသမီးဖြစ်ကြောင်းသိနိုင်ပါတယ်၊ သိပြီးသားလဲဖြစ်ပါတယ်။ သူမ ဆိုတာကြီးထည်ထည့်ပြန်ကြတော့ ကလေး တွေက "သူမ"ဆိုတာကြီးကိုမြန်မာစာ မှတ်ပြီး ပြောဆိုသုံးစွဲနေကြတာ ၀မ်းနည်းဖွယ်တွေ့ ရပါတယ်။
"သူ" ဆိုသည့် နာမ်စားသည် အထီး၊ အမ၊ တရစ္ဆာန် အားလုံးကို သုံးနိုင်ပါတယ်။
မောင်မောင်လေ သူအစ်ကို ကိုရိုက်လိုက်လိုတဲ့(အပြောခံနာမ်စားအဖြစ်)
သူကို အိမ်နီးနားချင်တွေက မမြ လို့ ခေါ်ကြသတဲ့ (အပြောခံနာမ်စားအဖြစ်)
အောင်နက်လေး သနားပါတယ် သူသခင်က ရိုက်လိုက်တာ
အထက်ပါ ၀ါကျများကို လေ့လာခြင်းအားဖြင့် "သူ"ဆိုသည့် နာမ်စားတစ်လုံးနှင့်ကိစ္စအားလုံးပြတ်ပါသည်အဘယ်ကြောင့်အလုပ်ရူပ်ခြင်းကြတာလဲ၊
အပြောခံ နာမ်စားတွေကို ဖြစ် သူ၊သင်း၊ငါ စသည့်တွေကို "မ" ထည့်ရင် သူမ၊ ငါမ၊ သင်းမ တွေဖြစ်ကြကုန်ရင်
ကျွန်တော် တင်ပြချက်များသည် မြန်မာစာ၊ မြန်မာစကားကို လွဲမှားစွာအသုံးပြုနေမည် စိုးသောကြောင့်
ကိုယ်စာပေကို ချစ်မြတ်နိုးမှသာလျှင် တိုင်းပြည်နှင့် လူမျိုးဂုဏ် တိုးတက်မြင့်မားလာမည်ဖြစ်ပါသည်။